नवराज कुँवर काठमाडाैं, २० जेठ
स्वीडेनले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘लकडाउन’ को सहारा लिएन । मानिसहरू घरबाहिर निश्चिन्त घुमिरहेका छन्, आफ्नो काम, व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।
यसको अर्थ, स्वीडेनमा कोरोना भाइरस नपुगेको होइन । वर्ल्ड मिटरको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म ३८ हजार नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यीमध्ये साढे ४ हजारको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसका बाबजुद स्वीडेनमा स्कुल, कलेज, रेस्टुरेन्ट, क्याफे सबै खुलेका छन् । के स्वीडेन सरकार कोरोनाबाट नडराएको हो त ?
पक्कै होइन । स्वीडेन कोरोनाबाट नडराएको भए लकडाउनको साटो नागरिक सचेतनालाई व्यापक बनाउँदैन थियो ।
हट्टाकट्टा र तन्नेरीहरूलाई घुमफिर तथा काम गर्न कुनै रोक नलगाए पनि स्वीडेन सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ । ज्येष्ठ तथा विभिन्न रोगबाट ग्रसित नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन भनिएको छ । किनकि, स्वीडेनमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन्, तीमध्ये अधिकांस अरु नै रोगबाट ग्रसित थिए ।
डब्लूएचओले चर्कै दबाब दिए पनि स्वीडेनले लकडाउनको साटो सामाजिक दूरी कायम गर्नुलाई नै कोरोनाविरुद्धको प्रमुख अस्त्रका रूपमा अपनाएको छ । स्वीडेनमा १ करोड ३० लाख जनसंख्या छ । स्वीडेनबाहेक सबै यूरोपेली देशहरूमा लकडाउनको कठोर नीति लागू गरिएको छ ।
५ करोड १६ लाख जनसंख्या भएको दक्षिण कोरियामा ११ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । यीमध्ये २ सय ७२ जनाको मृत्यु भएको छ । तर, अहिलेसम्म दक्षिण कोरियाले लकडाउनको सहारा लिएको छैन ।
बरु परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाएको छ । आफ्ना नागरिकलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिएको छ । दक्षिण कोरिया मात्र एउटा यस्तो देश हो, जसले लकडाउनमा नगई पहिलो चरणको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएको थियो । दक्षिण कोरियामा ११ हजार संक्रमितमध्ये १० हजारभन्दा बढी संक्रमित निको भइसकेका छन् । गत ३० अप्रिलसम्म त्यहाँ एक जना पनि कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका थिएनन् ।
आश्चर्यलाग्दो विषय त यो छ कि तुर्कमिनेस्तानमा अहिलेसम्म एक जनामा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण देखिएको छैन । यद्यपि, तुर्कमेन प्रशासन संक्रमणबाट बच्ने प्रयासमा मज्जाले जुटेको देख्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रको एजेन्सीसँग मिलेर एक्सन प्लान बनाएरै त्यहाँको सरकारले काम गरिरहेको बताइन्छ । बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको रेसिडेन्ट को–अर्डिनेटर एलेना पनोवाले यो प्लानअन्तर्गत देशभरमा को–अर्डिनेसन, रिस्क कम्युनिकेसन, केसको विवरण, ल्याब टेस्टिङ र अन्य उपायहरूमा काम भइरहेको बताएकी छन् ।
सुरुवातमै यात्राहरूमा रोक लगाउनुजस्ता उपायका कारण नै यहाँ संक्रमणको मामिला नदेखिएको बताइएको छ । तुर्कमेनिस्तानले करिब ३ महिनाअघि आफ्ना सबै जमिनी सीमाहरू बन्द गरेको थियो । फेब्रुअरीमै चीन र अन्य केही देशको हवाई यात्रामा पनि रोक लगाइएको थियो । साथै, सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई राजधानीको ठाउँमा तुर्कमेनाबादका लागि डाइभर्ट गरिएको थियो, जहाँ एक क्वारेन्टाइन जोन बनाइएको छ । कोरोना संक्रमणलाई लिएर त्यहाँको सरकार सजग चाहिँ छ । शहरहरूको बीचबाट आवतजावतमा रोक लगाइएको छ, राजधानी अश्गाबाट आउनेहरूसँग डाक्टरको रिपोर्ट हुन जरुरी हुन्छ ।
क्याफे र रेस्टुरेन्सहरू खुलै छन् । विवाहमा भीड उस्तै छ । कोही मास्क लगाएका देखिँदैनन् । मानिसहरू ठूलो भीड हुने खालका कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ ।
तजाकिस्तानमा गत ३० अप्रिलमा मात्र पहिलो संक्रमित पहिचान गरिएको थियो । अहिलेसम्म ४ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४७ जनाको मृत्यु भएको छ । यद्यपि, तजाकिस्तानले लकडाउनको सहारा लिएको छैन ।
त्यहाँको स्कुल र स्पोर्ट्समा भने रोक लगाइएको छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह भने गरेको छ ।
अमेरिकाले प्रभावित केही राज्यबाहेक लकडाउनको नीति अवलम्बन गर्न अस्वीकार गर्‍यो । भन्नेले भनिरहेका छन्, ‘यसै कारण अमेरिकामा धेरै मान्छे मरे ।’ यद्यपि, अमेरिकामा लकडाउन नगरिएका राज्यमा भन्दा लकडाउन गरिएकै राज्यमा बढी मानिस मरेका छन् ।
जापानले पनि लकडाउनको कठोर नीति नलिइकनै पहिलो चरणमै संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्यो । दोस्रो चरणको संक्रमणसँग जुध्न जापानले लकडाउनको सहारा लिए पनि पछि यो ठीक नहुने ठानेर हटाइदियो । मलेसिया र इण्डोनेसियाले पनि देशलाई पूर्णतः लकडाउनमा राखेनन् ।
यी देशको चर्चापछि अब नेपालतिर प्रवेश गरौँ । नेपाल लकडाउनको ७१औँ दिनमा छ । यो अवधिमा नेपालीले खेपेका दुःख कम टिठलाग्दा छैनन् । एकातिर कोरोनाको हाउगुजी, अर्कातिर भोक र शोकका कारण सर्वसाधारणका लागि ७१ दिन कम कष्टपूर्ण रहेनन् ।
पाँचौं पटक सरकारले ३२ जेठसम्म लकडाउन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि के हुन्छ ? सरकारी अधिकारी अझै अन्योलमा छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयासमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले यसअघि लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो बनाउने नीति लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दबाब दिएपछि लकडाउन कडा पारेको थियो ।
लकडाउन अनिश्चित बन्दा जनजीवनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि समस्याको भूमरिमा जकडिँदै गएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा २ हजारका हाराहारीमा संक्रमित पहिचान गरिएका छन् । यीमध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ । आश्चर्यको कुरा के छ भने संक्रमण पुष्टि भएका कोही पनि गम्भीर बिरामी छैनन्, धेरैमा लक्षण नै देखिएको छैन । तर, अर्को कुनै शारीरिक समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिको मृत्यु भएपछि परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३ महिनामा संसारभर आत्महत्या गर्नेको संख्या ३ लाख ५३ हजार ६ सय ९६ छ । यो संख्या विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मर्नेको संख्याको हाराहारीमा हो ।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ३ लाख ७७ हजार छ । डब्लूएचओका अनुसार संसारभरमा कोरोना संक्रमणका कारणभन्दा सडक दुर्घटना, रुघा खोकी र मलेरियाका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपालमा पनि हामी कोरोना संक्रमित र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या गन्दै बसेका छौँ । तर, कोरोनाभन्दा डरलाग्दो मृत्यु दरको कारण त लकडाउन, सडक दुर्घटना र अन्य रोग बनेको तथ्यले प्रमाणित गर्छ ।
नेपालमा लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आत्महत्याका घटना उल्लेख्य बढ्दै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । लकडाउनको सुरुवाती १६ दिनमा आत्महत्या दर दैनिक १६ जना थियो भने त्यसपछिका ४५ दिनमा दैनिक औसत १७ जना पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सुरुवाती आठ महिनामा औसत दिनमा १४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । अपराधको दर पनि पछिल्लो समयमा बढेको छ ।
प्रहरीको तथ्यांकले लकडाउन सुरू भएको दिन ११ चैतदेखि १० जेठसम्म ९ सय ६३ जनाले आत्महत्या गरेको देखाउँछ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मानिसहरूमा सबै खालका मानसिक तनाव बढेको छ । नेपालमा मात्र नभएर कोरोनाबाट पीडित सबै मुलुकमा अनेक किसिमका मानसिक रोग बढिरहेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार आत्महत्याका कारण पनि यही हो ।
मनोसामाजिक उल्झन तीव्र बन्दै गएपछि मानिसमा तनाव, चिन्तारोग, निद्रा नलाग्ने, डिप्रेसन हुनेजस्ता समस्या बढ्ने मनोविद् डा. गोपाल ढकाल बताउँछन् । मद्यमान र धूमपान सेवन गर्ने बढ्छन् । घरझगडा धेरै हुन्छ । पहिलेदेखि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेकालाई अझ गाह्रो हुन्छ । ‘जब मानसिक छटपटी र चिन्तालाई समयै रोक्न सकिँदैन, त्यसले आत्महत्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।
कोरोनाबाट बच्न भारतबाट घर फर्किएका ११ जना नेपालगञ्जमा गाडी पल्टेर मरे । लकडाउन अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट एक सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अन्य रोगले मरेकाको गणना त सरकारले गर्न आवश्यक ठानेकै छैन ।
भाइरसको डर त छँदैछ, यस्तो परिस्थितिमा अब जीवन कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले धेरैलाई सताइरहेको छ । मान्छेले काम गर्न पाएका छैनन्, आर्थिक संकट विकराल बन्दै छ, कति योजना तुहिएका छन्, अरू रोग लाग्दा उपचार गर्न पाइएको छैन ।
गत साता उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ का वडा सदस्य कृष्ण चौधरी बिरामी भए । उच्च रक्तचापको समस्या भएका उनको आरडीटी परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो । त्यसपछि उनको उपचार गर्न कुनै अस्पतालले मानेनन् । उनको मृत्यु भयो । बल्ल पीसीआर रिपोर्ट आयो, नेगेटिभ । मुलुकमा यसरी उपचार नपाएर मृत्यु भएकाको संख्या एकट्ठा गर्ने हो भने कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको भन्दा धेरै गुणा बढी हुन आउँछ ।
कोरोनाका माझ मुलुकमा डेंगी संक्रमण फैलिन सक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा डेंगी फैलियो भने स्थिति निकै भयावह हुने निश्चित छ । त्यसैले लकडाउन खोल्नुको विकल्प छैन ।
लकडाउनको विकल्प के त ?
कोरोना भाइरसविरुद्ध व्यक्तिगत (सामाजिक) दूरीको नियम बलियो अस्त्र हुन सक्छ । यो अस्त्र स्वीडेन, थाइल्याण्ड, जापान, तजाकिस्तान, अमेरिकालगायतका धेरै देशले अपनाएका छन् । लकडाउन नगरिकनै नागरिकलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने तर सुरक्षाका उपाय पनि सिकाउन सकिन्छ । स्वीडेनले जस्तै लकडाउनको साटो नागरिक सचेतनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
गैर–औषधीय ‘इन्टरभेन्सन’ को रूपमा लिइएको सामाजिक दूरीको नीतिले व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सोझै हुने संक्रमणको दर कम गर्न सक्ने बेलायतको इम्पेरियल कलेजको एक अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार व्यक्तिगत दूरीको नीति नअपनाउने हो भने एक संक्रमित व्यक्तिले उसमा भाइरस संक्रमण शुरू भएको ३६औं दिनसम्ममा ५ सय १२ जनालाई संक्रमित तुल्याउन सक्छ ।
यो अवस्था (३६औं दिनमा) मा आएर मात्र व्यक्तिगत दूरीको नीति लागू गरेमा संक्रमण शुरू भएको ६०औं दिनमा ४ हजार ९६ जना संक्रमित भइसक्छन् । तर यदि ३६औं दिनपछि पनि सामाजिक दूरीको नीति लागू नगर्ने हो भने ६० दिनपछि संक्रमितको संख्या ३० हजार पुग्छ भन्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, व्यक्तिगत दूरीको नीति कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
ज्येष्ठ नागरिक र अर्को कुनै गम्भीर रोगबाट ग्रसित नागरिकलाई अत्यावश्यकबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन भन्ने, कोरोनाको संक्रमण देखिएका क्षेत्रको जनजीवन विस्तारै सामान्य पार्दै सरकारले लकडाउनको विकल्पका रूपमा सामाजिक दूरीको नीतिलाई लिन सक्ने विज्ञहरू सुझाउँछन् ।
ठूल्ठूला सभा–सम्मेलन, धार्मिक भेलालाई अझै केही समय रोक लगाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको रोक कायम गरिए पनि घरेलु उडान खुला गर्न सकिन्छ । भारतबाट भित्रिने नागरिकको व्यवस्थापनमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै रहेर उपचार गर्ने र गम्भीर बिरामी भएको अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजाने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि अपनाइएको सबै नीतिको सार एउटै हो– मानिसका घरबाहिरका गतिविधि नियन्त्रण गरौँ, ताकि कोरोना भाइरसको फैलावट नियन्त्रण गर्न सकियोस् । विभिन्न देशका कोरोना भाइरस विरुद्धका नीतिमा लकडाउन, नयाँ कानूनको निर्माण, संक्रमित पत्ता लगाउन प्रविधिको प्रयोग र धेरैभन्दा धेरै परीक्षण छन् । तर, नेपालमा लकडाउनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ जुन जनजीवन र अर्थतन्त्र दुवैका लागि घातक छ ।
विश्वमा कोभिड–१९ का कारण हुने मृत्यु दर त्यति अत्यासलाग्दो छैन, जति हामी डराइरहेका छौँ । संक्रमित र मृत्यु भएकाको संख्या तुलना गर्ने हो भने कोभिड–१९ हल्ला गरिएजति खतरनाक होइन भन्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको मुत्यु दर १ देखि २ प्रतिशत मात्र छ । संक्रमितमध्ये हजारौँ मानिस आफैं निको भएर घर फर्किइरहेका छन् ।
नेपालमा त कोभिड–१९ का कारण भएको मृत्यु दर झनै सामान्य छ । ५ महिनाअघि नै पहिलो संक्रमण पुष्टि भए पनि अहिलेसम्म ८ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ, त्यो पनि स्वस्थ र तन्दुरुस्त व्यक्ति नभएर अरु नै समस्याबाट ग्रसित बिरामीको मृत्यु भएको देखिन्छ । त्यसैले यो हाउगुजीबाट मुक्त भएर सरकारले अर्थतन्त्र र जनजीवनप्रति गाम्भीर्यता देखाउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७, १७:५०:००
#लकडाउन हटाउने बहस